Home Ask Auntie Sue Murume wangu anokurumidza kupedza asi babamunini vati vanoda kundikwesha nhova
21:42:00 Ask Auntie Sue
Ndiri mudzimai ane makore 29, ndave nemakore 2 ndaroorwa. Ndakasangana nemurume wangu mubhazi ndichienda ku South Africa muna 2011. Takataura tese munzira tiri mubhazi ndokubva ndamupa phone number dzangu akandivimbisa kuti aizondifonera. Pakapera mwedzi wese asina kumbondifonera, nerimwe zuva ndakagara zvangu ndakanzwa yapinda nhare wanike ndiye Peter. Takataura kwenguva refu, nekufamba kwenguva rudo rwakatibata.
Peter aigara ku Kadoma ini ndaigara ku Gweru. Every Friday ndaikwira bhazi ndakananga Kadoma kunoona mudiwa wangu ndaizodzoka kumba Gweru Sunday manheru. Pese apa handina kumbobvira ndarara naye kusvika taroorana. Kutaura chokwadi Peter haazi iye akandibvisa humhandara ndakazotoroorwa na Peter ndararwa nevakomana vakati wandeyi chaizvo. Zvisineyi hazvo ndakamirira kusvika Peter andiroora asi ndakange ndanzwa nekuda kurarwa. Pfuma yese akabvisa kuvabereki vangu hapana chaasina kuvapa, mombe dzese nemari akabvisa asi dammbudziko rapinda mumba mangu ndere bonde.
Peter ane mudziyo muhombe chaizvo mubhurugwa make but haagone kushandisa zinhu rake.
Musi wekutanga paakabvisa hembe ndakafara ndaona kukura kwakaita zinhu rake nekuti ini ndine magaro mahombe saka ndiyo size yandainyatsoda tsvaga. Zuva rekutanga hatina kana kumbotora nguva refu Peter anga atotunda kare. Ndakashingirira semunhu anga achangobva kurorwa, pakapera mwedzi asi no change 2 minutes shasha inenge yatopedza. Ndakataurira babamunini anova munin’ina wake kuti Peter arikutadza basa rake mubedroom.
Nezuro ndakaramba kuenda ku Church nekuti ndainyatsonzwa kuda kurarwa apawo Peter ndokubuda mumagumbeze achiti anoda kuenda kuChurch. Ndakasara ndine hasha dzakanyanya. Ndakabuda mumagumbeze pakaenda Peter kuchurch ndokubva ndapinda mukitchen ndisina hangu kupfeka hembe sezvo ndakanga ndasara hangu ndega. Ndakarohwa nehana pakapinda babamunini mu kitchen ndokubva vandiudza kuti ndine magaro nemazamu akanaka. Ndakangonyemwerera ndokubva ndatarisa pasi ndichienda kubedroom.
Ndanzwa nenhomba yekuda kunyatsororwa nayo, asi Peter atadza basa rake. Babamunini vakanditi vanogona kundikwirwa kana ndisingazotaurire Peter. Zvino vehama ndibatsireiwo ndovhurira babamunini makumbo here ?